Ngwa anya anya
Otu Ọhụụ Ọhụụ
CR39 1.499 Otu Ọhụụ Ọhụụ
1.56 oghere ọhụụ otu
1.61 MR8 Anya Ọhụụ Otu
1.67 MR7 Anya Ọhụụ Otu
1.74 oghere ọhụụ otu
1.591 Polycarbonate oghere
Ọganihu na -aga n'ihu/Bifocal
1.499 Esemokwu Elu Dị Elu
1.499 Lens Bifocal Top gbara gburugburu
1.499 oghere na -aga n'ihu
1.56 oghere na -aga n'ihu
1.56 oghere na -aga n'ihu n'efu
1.61 oghere na -aga n'ihu
1.56 SV Foto Pink oghere
1.56 SV Foto Green oghere
1.56 Foto dị larịị
1.56 Foto na -aga n'ihu
1.56 Foto dị naanị n'ọhụụ
1.61 Spin Photogray oghere
1.67 Spin Photogray oghere
1.56 Ihe mkpuchi ọkụ na -acha anụnụ anụnụ
1.56 Na -aga n'ihu na -acha anụnụ anụnụ
1.56 Ihe mkpuchi oghere fotogray Blut
1.61 Anya acha anụnụ anụnụ
1.67 Anya acha anụnụ anụnụ
1.591 Igwe na -acha anụnụ anụnụ
Sens Finished Lens
1.56 SV Semi Emechara UC/HC/HMC
1.56 Ọkara Ọkara na -aga n'ihu UC/HC/HMC
1.56 Photogray na -aga n'ihu Semi Finished HC/HMC
1.499 Ọkara Ọkara Ọkara mechara UC/HC
Okpokoro nku anya titanium
Okpokoro Ngwaọrụ Metal
Ogwe osisi enyo anya TR
Wal-Mart Vision Center: Ọrụ, Ngwaahịa, Uru na ọghọm
Oge ezipụ: Aug-19-2021
Anyị na -agụnye ngwaahịa anyị chere na ọ bara uru maka ndị na -agụ ya. Ọ bụrụ n'ịzụta site na njikọ dị na ibe a, anyị nwere ike nweta obere ọrụ. Nke a bụ usoro anyị. Ịzụta ụfọdụ iko ọhụrụ n'ahịa? Mgbe ị na -achọ iko ọhụrụ, ọ dị ka ha nọ ebe niile. Ị nwere ike chọpụtala na W ...GỤKWUO »
Ezi mma China Semi-Finished / 1.56 / Single Vision / Photogrey / Optical Lens
Giovanni F. Akola, Franco Cardini, Domenico Del Niro, Giordano Bruno Gehry, Gennaro Margiri, Gennaro San Giuliano, Mirella Seri, Marcelo Veneziani. Da Fidel Castro na Charlie Sheen na Julio Iglesias, na -enye ohere maka ihe ịga nke ọma, ime mgbanwe, migliaia di donne giovani o meno gio ...GỤKWUO »
Uto nke Tesla abụghị ihe efu: ike ya dị ike na -egosi oke ọnụahịa ka ọ na -erule 2025 (NASDAQ: TSLA)
Kedu otu esi ahọrọ ọwa oghere na -aga n'ihu ngwa ngwa?
Itinye oghere oghere na -aga n'ihu na -abụkarị okwu na -ekpo ọkụ na ụlọ ọrụ optometry. Ihe kpatara oghere na -aga n'ihu ji dị iche na oghere oghere otu bụ na otu ụzọ oghere na -aga n'ihu nwere ike idozi nsogbu nke ndị agadi nwere ike ịhụ nke ọma site na anya, etiti na nso, nke dị mfe ...GỤKWUO »
Ọbụghị naanị na oghere fotochromic nwere isi awọ, kamakwa ndị a ??
Anya na-agbanwe agba, nke a makwaara dị ka "lenses photosensitive". N'ihi na agbakwunyere kemịkal nke ọlaọcha halide na oghere, oghere mbụ na -enweghị ntụpọ na nke na -enweghị agba ga -abụ oghere nwere agba mgbe ekpughere ya na ọkụ siri ike iji chebe ya, yabụ ọ dabara maka ...GỤKWUO »
Kedu ihe kpatara mgbanwụ/photochromic myopia oghere nwere ike gbanwee agba
Dịka myopic na -eme ugboro ugboro, ụdị iko myopic niile na -apụta na enweghị njedebe, yabụ kedu ka agba si gbanwee iko myopic ghọrọ nsogbu nke onye ọ bụla na -eche. N'ihi na iko myopia na -acha odo odo na -adị mma, yabụ na ọ bụ nhọrọ nke ọtụtụ ndị ọrịa myopic, n'okpuru maka myopia agba agba ...GỤKWUO »
Nke a bụ nzaghachi onye ndu mmegide na mmefu ego | Akụkọ mpaghara
Onye ndu mmegide Kamla Persad-Bissessar taa wepụtara nzaghachi ndị mmegide na mmefu ego nke Mọnde nke Minista Ego Colm Imbert nyefere. Daalụ, Onye isi okwu, ma kelee ụlọ ikpe a maka ohere inye aka na arụmụka a na mkpesa mmefu ego nke anọ nke gọọmentị. Enwere m olileanya na n'ime ...GỤKWUO »
Nkọwa Zenni: Onye kwuru “mba” na otu iko ọgwụ ọgwụ $ 7?
Emefuru m ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ $ 600 na iko na anya m ikpeazụ-ọ bụ mgbe mkpuchi ọhụụ malitere. Akụkọ m abụghị ihe ọhụrụ. Mgbe ịzụrụ site n'agbụ anya anya, ndị na-emepụta boutiques ma ọ bụ ọbụna optometrists, ọnụahịa na-abawanye maka ọtụtụ iko aha aha na anya ndenye aha na-abụkarị ...GỤKWUO »
Kedu ihe kpatara m ga -adụ gị ọdụ ka ị họrọ oghere anya photochromic?
1, Ebumnuche abụọ, zere nsogbu nke iwepụ na iyi Myopia nwere ogo anya na-emegharị ahụ, n'oge ọkọchị mgbe enwere ọtụtụ anwụ anwụ mgbe niile, dị ka sunscreen iji nwee ugogbe anya ugogbe anya, mana ọ gwụla ma ọ bụrụ na ị na-eyi enyo anya. na ugogbe anya maka anwụ, ma ọ bụghị enweghị ike ịhụ ụzọ nke ọma; Na ...GỤKWUO »
Kedu ihe ị maara gbasara “anya anya fotochromic”?
Oge ọkọchị na -ekpo ọkụ nke ukwuu, na -akwado obere ezumike ogologo iji pụọ ka ndị enyi nwee ike nwee ntụsara ahụ ịpụ ịnụ ụtọ ìhè anyanwụ. Mana maka ndị enyi na -eyi iko, mana anya photophobia, enweghị ike ịgbaso obi iyi ugogbe anya maka anwụ ma ọ bụ mkpa iyi iko abụọ nke nsogbu. Na a ...GỤKWUO »
Kedu otu esi ahọrọ akara ngosi Refractive ziri ezi Lens maka iko?
1 、 Kedu otu esi ahọrọ? Mgbe iko dabara, mgbe abịarutere ịhọrọ njikọ nke Lens, Glasses Party anaghị efu? Amaghị otu esi ahọrọ oghere. Nke a bụ otu esi ahọrọ oghere dị mma maka ogo gị. 2, The Refractive index The Refractive index bụ ruru nke mgbasa s ...GỤKWUO »
Ikpughe ihe maka oghere anya m
Ọtụtụ ihe na -emetụta oke oghere nke iko, nke ike oghere bụ isi ihe kpatara ya. Mpekere Lens nke Myopia dị elu dị arọ karịa nke Myopia dị ala. Agbanyeghị, mgbe a bịara n'ịdị oke, dayameta nke Lens dịkwa mkpa, na ịhọrọ obere etiti nwere ike banye ...GỤKWUO »
Okporo ụzọ No2, New Wanbao Road, Fenghuang Industry Park, Yanling Town, Danyang City, Jiangsu Province, China
Wal-Mart Vision Center: Ọrụ, Ngwaahịa ...
Anyị na -agụnye ngwaahịa anyị chere na ọ bara uru maka ndị na -agụ ya. Ọ bụrụ n'ịzụta site na njikọ dị na ibe a, anyị nwere ike nweta obere ọrụ. Nke a bụ usoro anyị. Ịzụta ụfọdụ iko ọhụrụ n'ahịa? Mgbe ị na -achọ ihe ọhụrụ ...
Ezi mma China ọkara Emechara / 1.56 / ...
Giovanni F. Akola, Franco Cardini, Domenico Del Niro, Giordano Bruno Gehry, Gennaro Margiri, Gennaro San Giuliano, Mirella Seri, Marcelo Veneziani. Da Fidel Castro na Charlie Sheen na Julio Iglesias,…
Uto Tesla abụghị ihe efu: ...
Kedu otu esi ahọrọ oghere oghere na -aga n'ihu ch ...
Itinye oghere oghere na -aga n'ihu na -abụkarị okwu na -ekpo ọkụ na ụlọ ọrụ optometry. Ihe kpatara oghere na -aga n'ihu ji dị iche na oghere oghere otu bụ na otu oghere oghere na -aga n'ihu nwere ike idozi nsogbu nke ...
Ọbụghị naanị na oghere fotochromic isi awọ, b ...
Anya na-agbanwe agba, nke a makwaara dị ka "lenses photosensitive". N'ihi na agbakwunyere kemịkal nke halide ọlaọcha na oghere, oghere mbụ na -enweghị ntụpọ na agba na -enweghị agba ga -abụ c ...
Copyright - 2010-2021: Ikike niile echekwabara. 苏 ICP 备 11022256 号 -1